Falanqeyn: Maxay tahay sababta ka dambeysa imaanshaha Xasan Sheekh Ka hor doorashada 2020 – Puntlandtimes
Falanqeyn: Maxay tahay sababta ka dambeysa imaanshaha Xasan Sheekh Ka hor doorashada 2020
August 31, 2018 W LAASCAANO
10-kii September, 2012 ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, kadib markii codad gaaraya 190 cod uu helay Wareegii u dambeeyay ee doorashada, isagoo ka guuleystay Sheikh Shariif oo helay 79 cod.
Isaga, 8 February 2017 ayaa looga guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, ee uu kusoo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Markii uu xilka wareejiyay kadib bishii March ee sanadkii hore ayuu ka duulay magaalada Muqdisho, sanad iyo bar kadib waxaa jiro arrimo badan oo is biirsaday oo sababay dib ugu soo laabashadiisa Muqdisho.
Xasan Sheikh, Sababaha uu u yimid Muqdisho, wuxuu ku sheegay inuu wadatashiyo sameyn doono, kaasi oo ku saabsan xaaladaha dalka ka jiro.
Xildhibaana ma aheyn in laga dhigo, Danbiya waaween ayuu ka galey dalka. Maxkamad in la soo saaro ayey ahey, waaba yaab isaga oo wali raja ka qaba, siyaasada Somaliya.